Bengstfors | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Västra Götalands län / Bengstfors
Degmada Bengtsfors waxay inte badana lagu yaqaan waa dabeecadeeda quruxda badan. Degmada waxeey lee dahay shan xaafado; Bengtsfors (bartmaha xafaadooyinka), Billingsfors, Skåpafors, Bäckefors iyo Dals Långed.
890 kiilomitir oo laba jibaaran
Karlstad 110 kiilomitir
Göteborg 170 kiilomitir
Degmada Bengtsfors waxeey ku taalaa Dalsland ee uu dhaxeeysoo wabiga Iswiidhan ugu weeyn Vänern iyo Noorwey. Wadada-tareeyka uu dhaxeeyo Göteborg iyo Oslo ayaa dhexmarto qeeybta koonfureed ee degmada. Shaqooyinka badankood waxeey ku jiraan qeeybaha warshadeeynta iyo xanaaneeynta iyo daryeelka iyo waxbarashada.
Bengtsfors waxeey lee dahay shirkad guri oo degmada lee dahay, Bengtsforshus. Degmada sido kale waxaa ku yaalo shirkado guri oo madaxbanaan.
Bengtsforshus Shirkadaha guryaha iyo guri iibiyayaasha ku qoran bogga intarnatka ee
Luuqada waqooyiga yurub (afka noorweey, afka danishka, afka finland, afka island). Luuqadaha yurub (af romani, afka jarmal, af taliyaani, afka fransiis, afka isbaayn, afka bortiqis, af serbokroshiya, afka albaaniya, af ruush, afka flamlandska, afka holland, afka belgium, afka booland, afka rumaaniya, afka bulgaariya, af ingriis, afka turkiga). Luuqada kale oo degmada ku matalaan waa: af carabi, af soomaali, af tigrinya, afka uzbekistan, afka kirgistan, afka kuridga, afka iraan, af urdu, af faarisi, af mandarin, afka vietnam, afka thayland, afka krio (kreol ee Sierra leone).
Degmada Bengtsfors waxeey lee dahay ururo badan. Halkaan waxaa ka ma mid ah oo jira ururka Kalas xudu l'aa oo ah urur dhaqameed oo leh howl la xariirto fara badnaanshaha dhaqanka.
Billingsfors waxaa ku yaalo Mötesplatsen halkaasi ee dad badan oo ka socdo dhaqamooyin iyo luuqado kala duwan fursad uu helayaan hoowlo ka qeeyb qaatan, amaahdaan kombiyuutar iyo in ee la kulmaan Hey'adda socdaalka.
Sida kale, xafiiska shaqada, maktabada (Bengtsfors, Dals Långed, Bäckefors). Dukaanka gacan labaadka ee Returen waxuu iibiyaa alaab guri iyo in kale, waxuuna ku yaala Karls Gärde ee ka baxsan Dals Långed.
Dugsiga xanaanada xaafad kasto ayuu degmada ugu yaalaa. Sido kale, xarun reereed ayaa ku taalo Bengtsfors oo walidiinta iyo caruurtooda ku soo dhaw yihiin.
Dugsi hoose fasalka 1-5 waxuu ka jiraa Bengtsfors, Dals Långed iyo Bäckefors. Sido kale Bengtsfors waxaa ku yaalo dugsi dhexe fasalka 6-9 iyo dugsi sare oo leh soo badnhigiisa waxbarashadeed badan tahay. Sido kalena Bengtsfors waxaa ku yaalo dugsi hoose ee gaar oo loogu tala galay caruur leh caqabad jireed ama maskaxeed.
Bengtsfors waxaa jirto fursad lagu dhigan karo dugsiga sare ee dadka waa weeyn. Waxbarashad dadka waa weeyn waxeey lee dahay soo bandhigid weeyn ee xagga waxbarashada, kuwo gaar ah iyo kuwo wadashaeeyn ugu dhaxeeyso jamaacad ama iyo meel kale. Sido waxaad halkaan waxbarasho ku dhigan kartaa iswiidhiska loogu tala galay soo galooytiga. Sido kale Gudaha Dals Långed waxaa ku yaalo jaamacad ee xagaa farsamada gacanta iyo naqshada – HDK Steneby.
Gudaha Bengtsfors waxaa ku taalo rug caafimaad oo leh qeeyb daryeelka hooyooyinka iyo daryeelka caafimaadka caruurta. Sido kale halkaan waxaa joogo dhakhtaro ilko ee badan. Bäckefors waxaa ku yaalo isbitaal leh xarunta heeganka.
Degmada waxeey isticmaasha turjumaano ansaxsan oo ka socdo xarumaha-turjumaanada, kuwo Karlstad iyo kuwa meelaha-galbeedka.
Waxa ugu sahlan in Bengtsfors looga imaado iyo lagu tago waa bas, Västtrafik ayaa dhexmarto waaxda. Haddii la rabo in tareen la qaato, marka hore waa in la tagaa degmooyinka aan dariska la nahay; Dals-Ed eller Åmål.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Bengstfors